Latest News of Nepal | Nepali News Headlines Today
स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल भन्छन्ः अबको चार महिनामा १ लाख ४८ हजार नेपाली संक्रमित हुनसक्छन्
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अबको चार महिनामा १ लाख ४८ हजार नेपाली संक्रमित हुनसक्ने बताएका छन् । ‘कोभिड–१९ महामारी र जोखिममा प्रभावकारी सञ्चारका लागि सांसदहरुको भूमिका’ सम्बन्धमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले यस्तो बताएका हुन्। विस्तृतमा
मेयर शाक्यद्वारा शङ्खधर सङ्ग्रहालयसहितको सामुदायिक भवन उद्घाटन
थप २४ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
थप १ हजार ७९० जनामा कोरोना पुष्टि
बालिकाको हत्या प्रकरणपछि बर्दिबास तनावग्रस्त
प्रहरीलाई थप जवाफदेही बनाउन टेलिफोन संवाद कार्यक्रम शुरु
जोखिम बढेपछि काठमाडौँ महानगरद्वारा मोबाइल भ्यानमार्फत स्वाब सङ्कलन
मनाङे मुद्दामा सर्वोच्चबाट कैफियत माग
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दीपक मनाङेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
विश्वकपमा बाजी लगाउने टोलेगुन्डा पक्राउ
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलका खेलमा बाजी खेलाएकै अभियोगमा प्रहरीले टोलेगुन्डा राजनकुमार भुजेललाई पक्राउ गरेको छ ।
रेल चढ्न सांसदलाई निम्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको आफ्नै रेल आउँने कुरामा शंका नगर्न भन्दै सांसदलाई रेल चढ्न निम्ता दिएका छन ।
प्रतिनिधिसभामा पेश भएका दुर्इ विधेयक बहुमतले पारित
काठमाडौँ । प्रतिनिधिको आजको दोस्रो बैठकले ‘राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक, २०७५ लाई बहुमतले पारित गरेको छ ।
देशभर धान दिवसको मोह ( फोटो फिचर )
धान दिवसको अवसरमा आज देशैभरका विभिन्न स्थानमा धान रोपाइ कार्यक्रम मनाइएको छ । असार महिना ‘मानो रोपेर मुरी फलाउन’ दिन । अर्थात आज असार १५, धान दिवस । ‘धान उत्पादनमा बृद्धिः राष्ट्रको समृद्धि’ भन्ने मूलनाराका साथ १५ औँ धान दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी देशभर मनाइएको छ ।
आकाशको पानी कुर्दै किसान !
चितवन राम्ररी वर्षा नहुँदा मध्यअसार लाग्दासमेत चितवनमा पर्याप्त मात्रामा रोपाइँ हुन सकेको छैन । सिँचाइ अभावले जिल्लामा अघिल्लो वर्षभन्दा आधामात्रै रोपाइँ भएको छ ।
साझा यातायातले २४ नयाँ बस भित्र्याउँदै
ललितपुर । साझा यातायातले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर चल्ने गरी नयाँ २४ वटा बस थप गर्ने भएको छ ।
आलिताल संरक्षणका लागि पहल
डडेल्धुरा । पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण आलितालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आलिताल गाउँपालिकाले पहल शुरु गरेको छ ।
पाँच महिनामा ३६ जघन्य अपराध
चितवन । पाँच महिनाको अवधिमा जघन्य अपराधका तीन दर्जन घटना भएका छन् ।
प्रहरी ईन्सपेटर भन्दै पैसा असुली गर्ने ४ जना पक्राउ
पोखरा । कास्की प्रहरीले प्रहरी ईन्सपेटर भन्दै पैसा असुली गर्ने ४ जनालाई पोखराबाट पक्राउ गरेको छ ।
राति निन्द्रा लाग्दैन ?
एजेन्सी । निद्रा सबैको लागि प्यारो हुन्छ । यसमा पनि रातको निद्रा सबैभन्दा खास हुन्छ । यदि रातमा निद्रा लागेन भने मानिसलाई छटपटि लाग्न सक्छ । यसका साथै निद्रा नपुगेमा अन्य थुप्रै रोग समेत लाग्न सक्छ । यसका लागि समाधानको उपायको रुपमा यी कुराहरुलाई अपनाउन सकिन्छ ।